10 | October | 2014 | Danya Wadi
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ အတွက် အိမ်တွင်းဆေးဝါးများ
By danyawadi October 10, 2014 Leaveacomment
Asthma ဆိုသော ဝေါဟာရမှာ ရှေးဂရိဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၊ Panting or Short drawn breath(ခေါ်)တိုတောင်းလျှင်မြန်စွာ အ သက်ရှုခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ ဓာတ်မတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုန့် ပြန်မှုက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှာ ပြသနာအကြီးကြီးဖြစ်စေပါတော့တယ်။ ကလေး/လူကြီး၊ ကျား/မ မရွေးဖြစ်တတ်ကာ၊ အများအားဖြင့် မိဘ မျိုး ရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ညသန်းခေါင်(သို့ မဟုတ်)နံက်လင်းအားကြီး အချိန်တွေမှာ ရောဂါထလေ့ ရှိပြီး၊ ချွေးေ စး များထွက်ကာ တရွှီရွှီမြည်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကြောင့် အလွန် ပင်ပန်း လှသလို၊ ရောဂါ ခံစားနေရသူကိုကြည့်၍ ဘေးမှမြင်ရ/ကြားရ သူအဖို့ လည်း စိတ်မသက်သာလှပေ။ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်။ (၁) ရနံ့ စူးရှသော အစားအသောက်/ရေမွှေး/ပန့်း ရနံ တို့ က ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ကာ ပန်းနာရင်ကျပ်ထလာစေလို […]
Published October 10, 2014 Associated Press Sept. 27, 2013: Malala Yousafzai listens as Harvard President Drew Gilpin Faust introduces her to reporters at Harvard University in Cambridge, Mass. (AP Photo/Jessica Rinaldi, File) Oct. 10, 2014 – Indian children’s rights activist Kailash Satyarthi addresses the media at his office in New Delhi, India. Malala Yousafzai […]
အင်ကြင်းနိုင် 08.10.2014 မနေ့က စစ်တွေထောင်ကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ MSF ၀န်ထမ်းဟောင်း ရှေ့နေ ဦးကျော်လှအောင်ကတော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျား-မ ခွဲခြားမှုမရှိတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ လွတ်လာပြီးနာရီပိုင်းအတွင်း မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ သူက အခုလို စပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ “ကျနော့်ကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ၁ နှစ်ခွဲထောင်ဒဏ်ချလိုက်တယ်။ ကျနော့်ကိစ္စ ရှေ့နေနဲ့ အယူခံ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို အယူခံတွေ ဘာတွေတင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ၇ ရက်နေ့က ဘာထွက်လဲဆိုတော့ အစိုးရက သမ္မတရုံးက ထောင်ထဲမှာ နေပြီးတော့ ၆ လကျန်တဲ့သူတွေပေါ့ ဥပမာ – ၁ နှစ်ကျော်နေခဲ့ရမယ်။ ၆ လ […]
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု မာလာလာ ရရှိ
အောက်တိုဘာ ၁၀။ ၂၀၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ကလေးသူငယ်ပညာရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မာလာလာ ယူစွတ်ဖ်ဇိုင်း (Malala Yousafzai )နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကလေးအခွင့်ရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုင်လတ်ရ်ှဆာ့တ်ယာသီ ((Kailash Satyarthi)တို့ ပူးတွဲရရှိသွားပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသူ မာလာလာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကလေးငယ်နဲ့ အမျိုးသမီး ပညာရေး သင်ကြားခွင့်ကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးငယ်နဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အခြေအနေကို အကောင်းဆုံး တိုးတက်အောင်မြင်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး ပညာသင်ကြားခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မာလာလာဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရပြီး အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက စာနာသူတွေက သူ့ကို အရင်နှစ်တွေမှာလည်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိဖို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီး ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ […]
IS အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းသွားသော အကြမ်းဖက်သမား ၈ဝဝခန့်တွင် မြန်မာပြည်မှ အကြမ်းဖက်သမား ပါ မပါ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေ
– ဇွဲမာန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၀) အမှတ် (၃၉)။ ရန်ကုန်၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ မှပေးပို့သော IS အဖွဲ့ (အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော်)အတွင်းသို့ ပူးပေါင်းသွား သည့် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်ရေးသမား ၇၈၁ ဦးစာရင်းတွင် ပြည် တွင်းရှိ အကြမ်းဖက်သမားများ ပါဝင် မှုရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ သိရသည်။ ”လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေး အဆင့်ကို ပုံမှန်နဲ့အဝါရောင်ကြားအ ဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ကုလကထုတ် ပြန်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်သမား ၇၈၁ ဦးရဲ့စာရင်းမှာ ပြည်တွင်းက အကြမ်း ဖက်သမားတွေပါဝင်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေး နေပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦး က ပြောကြားသည်။ (၆၉)ကြိမ်မြောက် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ကုလ လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲ၌ […]
နယူးယောက်မြို့က ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် အင်ကြင်းနိုင် 10.10.2014 06:10 ကုလသမဂ္ဂကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အထူးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ နိုင်ငံတခု အနေနဲ့ နှစ်စဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နေတဲ့ အနေအထား ပယ်ဖျက်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီ လို့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် က ဒီနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ မှာပြောဆိုသွားပေမဲ့ မြန်မာလူထု အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ ကတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဟာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေကို တင်ပြခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Women Peace Network Arakan ရဲ့တာဝန်ခံ မဝေေ၀နုကိုမေးကြည့်တော့ “ကျမတို့အခုတွေ့တာက အဓိက ကတော့ UN Mission တွေပေါ့နော် နိုင်ငံတကာ UN Missionsတွေ […]